रेखाले डिभोर्स पछि ८० लाख छाड्दा शिल्पा को डिमाण्ड कति ? वकिलले गरे गम्भीर खुलासा - Nepal Insider
Home/समाचार/रेखाले डिभोर्स पछि ८० लाख छाड्दा शिल्पा को डिमाण्ड कति ? वकिलले गरे गम्भीर खुलासा
रेखाले डिभोर्स पछि ८० लाख छाड्दा शिल्पा को डिमाण्ड कति ? वकिलले गरे गम्भीर खुलासा
काठमाडौँ – अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफ्नो श्रीमान छविराज ओझा विरुद्ध एकाएक प्रहरीमा उजु*री गरेपछि माहोल गर्माएको थियो । तर गत बिहिबार निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरलेबिच महानगरीय प्रहरी परिसर,टेकुमा सहमति भएको छ ।
छबी र शिल्पाको विषयले सामाजिक संजालमा निक्कै ठुलो क्रिया प्रतिक्रिया पनि चलेको छ । यसै बीच एक अधिवक्ताले उनीहरुको सम्बन्ध र सम्बन्ध विक्षतको बारेमा बोलेका छन । पुरा भिडियो हेर्नुहोस :
शिल्पा र छबीको विवाह टिक्दैन, छबीको अझै एउटा विवाह गर्ने योग छ – सविता माता (भिडियो)